FAQs - Changzhou longxin Makiinado Co., Ltd
Sideed dhibcood fiiro in xulashada iyo iibsiga Sand Mill
wax 1.Rotor: shiidi doona hababka dhagax ciid waxaa badanaa loo kala qaybiyaa laba nooc, mid waa ul-pin rotor nooca iyo qolladdii shiidi doona, labaad waa nooc disc darane. Saamaynta shiidi doona nooca ul-pin waxaa aad uga wanaagsan in nooca disc.
wax 2.Cylinder: in industry dhagax ciid, saarayaasha ugu dooran doonaa ahama dhululubo maadi ah. Laakiin waxaa jira noocyo badan oo kala duwan bir, taas oo loo baahan yahay in la xaqiijiyay by macaamiisha.
qaboojinta 3.Equipment iyo saamaynta quwad farsamo: Haddii saamaynta quwad farsamo wanaagsan yahay. Haddii ay jirto xaalad baxsiga. Sidee dheer waa cimri qiyaastii. Nuqdada muhiimka ah ee su'aalahan ay tahay in haddii dareere ku wareegaya la sameeyo oo biyo ah ama dareeraha kaas oo la kala diri ee wax ku shiidi doona in ay ka fogaadaan wax soo saarka ka la nijaaseeyey habka wax soo saarka iyo khasaaraha dhaqaale.
qalab 4.Separation Somaaliya Zirconium iyo Qalabka: In dhagax ciid siman, dhexdhexaad ah ee ku shiidi waxaa inta badan laga soocay wax by qalab-soociddiisa oo ka kooban by giraan firfircoon iyo giraanta ma guurto ah.
5.Operation hab: The qayb gacanta ugu muhiimsan waa mid fudud in ay ku shaqeeyaan.
oolnimada 6.Production: design dhismeedka macquul ah u marin kara tayada wax soo saarka iyo tayada wax soo saarka
ilaalinta 7.Safety: Doorashada iyo tayada qalabka korontada waa in ay xaqiijiyaan ammaanka.
8.Replacement, labiska midabka iyo nadiifinta kuul zirconium: Maxaa ku saabsan saamaynta is-nadiifinta ah? Haddii design ee ku shiidi qolkii aan xagal dhintay?
Kuwanu waa sideed dhibcood macaamiisha u baahan tahay inaad bixiso si aad marka aad dooranayso iyo iibsiga dhagax ciid dareenka. Rajaynaynaa in ay caawin doonaan. Oo soo dhaweynayaa in ay la Changzhou Longxin Makiinado Co., Ltd. The Sales kulul-line tasho: 0519-88608368
Codsiga of Saddex rullaluistemadka Mill in Production khad
Shiidi mashiinka waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in warshado badan in ku habboon in our nolol maalmeedka. Sababo la xiriira horumarka of technology, waxaa sidoo kale si joogto ah horumarinta. Mashiinka darane kala duwan ka muuqda line-soo-saarka. Oo kuwanuna nooc kala duwan ee mashiinka leeyihiin sifooyinka iyo faa'iidooyinka u gaar ah si ay u si fiican ula-soo-saarka iyo nolosha shaqeeyaan. Saddex dhagax rullaluistemadka waa nooc ka mid ah mashiinka darane si weyn loo isticmaalo. Waxaa mudan in la sheego in saddex rullaluistemadka dhagax waa mashiin qalab dheeraad ah oo faa'iido soo saarka khad ah. Halkan waa xaalad isticmaalka dhagax saddex rullaluistemadka inta lagu guda jiro soo saarka khad.
First, mabda'a qalliinka ah dhagax saddex duuban,
dusha ka mid ah saddex rollers horizontal diyaarin waa extruded iyo khilaaf ah ee xawaaraha kala duwan waxaa loo isticmaalaa si loo gaaro saamayn sii darane qaarkood. Sidaa darteed, dhagax saddex isaguu ku qaawi karaa wax fiican inta badan sababta oo ah shaqo saddex rollers. Hoos waxaa ku muuqaalada saddex dhagax duuban marka saara khad.
Rullaluistemadka 1. waxaa inta badan ka samaysan birta daawaha kabka qabow-adag by shubay culus si qalbi engegnaantiinna aawadeed dusha waa mid aad u sarreeya. Saddex dhagax rullaluistemadka waa xoog sare iyo mashiinka shiidi Duugga u adkaysta la qalleyf xoog leh. Sidaa darteed, in habka wax soo saarka khad, shaqo ee rullaluistemadka ma saameyn doono cadaadis dibadda iyo heerkulka.
2.Beerta dhexroor of isaguu ku tahay waa dhul usii sare, sidaa daraadeed waxa qaawi karaa si sax ah si ay u sameeyaan fineness ee wax khad ka yar 5 microns, sidaas saara uniform iyo waxyaabaha wanaagsan oo tayo sare leh.
Nidaamka drive 3.Beerta saddex dhagax rullaluistemadka sidoo kale waa dabeecadda. Waxa ay ansixiyeen multi-line sprocket bilowga jilicsan. Sidaas awgeed waxa aad u hufan oo la simi marka ka hawlgala oo aan buuq. Intaa waxaa dheer, waxa ay ansixiyeen keensato nooca fur gacanta-wheel si ay ula qabsadaan meel fog oo duudduuban oo ay ka dhigi hawlgal fudud oo sax ah.
Daqiijin jireen rullaluistemadka 4.Three qabsato ansixin u dhexeeya rollers ah by gacanta fur gacanta-wheel siman. Waxa kale oo ay qabsato kartaa size walxaha mid ah waxyaabaha la soo. Sidaas hab this, habka of khad shiidi noqday sahlan.
5.The dhagax saddex isaguu ku qalabeysan yahay qalab qaboojinta dhereggu kulaylka ahaan marka shuqullada duuban.
In eray, saddex daqiijin jireen rullaluistemadka ma gaari karo oo keliya saamayn aalladda wanaagsan, laakiin sidoo kale gaaro oolnimada sare. Its qaababka badan oo ay awoodaan in ay la qabsadaan si wax soo saarka ee khad. Sidaa darteed, saddex daqiijin jireen duuban ee wax soo saarka khad waa mid aad u rajo.
Dhib for unu Common ee Furimaha Horizontal
Mashiinka darane Horizontal waa Dhuxul ah oo ku shiidi qoyska mishiinka, taas oo ah waxa lagu gartaa dhululubo hawlgalka siman. In wax soo saarka maalin kasta, waa lama huraan in ay jiri doonaan unu qaar ka mid ah, laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah la suulin karin by macaamiisha.
Haddii ay jiraan dhibaato la wareegga biyaha, sida ku fashilmeen in ay ka shaqeeyaan, waxaad eegi kartaa haddii waalka solenoid waa dhegto ama la waxyeeleeyey, kuna bedesho haddii ay sidaas tahay.
Haddii motor waa dhegto, waxaa laga yaabaa sababta oo ah xoog bamka diaphragm ee aan si fiican u beddelo. Waxaa lagu xallin karaa in la hagaajiyo saxan suun si loo yareeyo cadaadiska ee filter, ka dibna howleheedii motor ah.
Haddii bamka diaphragm uusan ka jawaabin, hubi haddii waalka solenoid hallaabo. Haddii ul waalka waa ku xayiran, ku dar saliid ah transformer yar laga galo biibiilaha iyo dib u galay biibiile gelin. Markaasaa la kordhiyo cadaadiska oo garaacayaa jirka bamka si ay u xaliyaan dhibaatada.
Haddii eeg cadaadiska muujinaysaa in cadaadiska uu aad u sarreeyo, waxaa laga yaabaa sababta oo ah in disc shaandheeyo laga xannibo iyo u baahan in la nadiifiyo.
Haddii biyaha qaboojinta waxaa la caddeeyo, waxaa laga yaabaa in dhibaato la daweyn ah.
Booska dhalista Ruush waxaa kulaylinta ka badan 60 ℃, waxaa laga yaabaa la'aan subag ama dhalista dhaawac, waa in la cusboonaysiiyey wakhtiga.